IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (i-e-Visa yaseIndiya) | Ulwazi lwe-eVisa
Ulwazi lwe-eVisa India
1. Kuxhomekeka kwisizathu sokuza kwendwendwe eIndiya, banokufaka isicelo kwenye yezi zinto zilandelayo ze-Indian e-Visas
Ngenjongo yokhenketho kunye nokubona, undwendwe kufuneka enze isicelo se Abakhenkethi e-Visa baseIndiya (eVisa India).
Ngeenjongo zeshishini kunye nezorhwebo, undwendwe kufuneka lufake isicelo se Ishishini le-Visa laseIndiya (eVisa India).
Ngenjongo yokufumana unyango, undwendwe kufuneka lufake isicelo Unyango lwe-e-Visa yase India (eVisa India).
Ngenjongo yokuza njengegosa lezonyango kumntu oza kufumana unyango apha, undwendwe malufake isicelo Ugqirha we-e-Visa wase-India (eVisa India).
I-Visa yaseIndiya ngoku yinkqubo ekwi-Intanethi engadingi kutyelelwa kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya. Isicelo sinokugqitywa kwi-intanethi nge-visa ye-elektroniki e-India. Unokufaka isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi ukusuka kwiselula yakho, iPC okanye ithebhulethi kwaye ufumane eVisa India nge-imeyile.
2. IVisa yabakhenkethi eIndiya (eVisa India)
I-Visa ye-Indiya yeTyelelo lwaseIndiya luhlobo lokugunyazwa kwe-elektroniki okuvumela abafaki zicelo ukuba batyelele e-India ukuba injongo yokutyelela kwabo yile:
ukhenketho kunye nokubona,
ukutyelela usapho kunye / okanye abahlobo, okanye
ye Yoga ukubuyela umva okanye ikhosi emfutshane yeYoga.
Kuxhomekeka ekubeni zingaphi iintsuku iindwendwe ezifuna ukuhlala kuzo, zinokufaka isicelo kolunye kwezi ntlobo zintathu ze-e-Visa:
Abakhenkethi beentsuku ezingama-30 e-Visa, eyiVisa yokuNgena kabini. Unokufumana isikhokelo ngakumbi ukuba nini I-Visa yaseIndiya yokuphela kwexesha leentsuku ezingama-30.
I-Visa yoKhenketho yeNdalo eyi-1, eyiVisa yokuNgena okuninzi.
I-Visa yoKhenketho yeNdalo eyi-5, eyiVisa yokuNgena okuninzi.
I-Visa yabakhenkethi ikuvumela ukuba uhlale elizweni kuphela iintsuku ezili-180 ngexesha. Isicelo sinokuqaliswa kwi-intanethi kwi Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya phepha.
3. IVisa yoShishino lwaseIndiya (eVisa India)
I-e-Visa yeNdiya yaseIndiya luhlobo lokugunyazwa kwe-elektroniki okuvumela abafaki-zicelo ukuba bandwendwele e-India ukuba injongo yokutyelela kwabo yile:
ukuthengisa okanye ukuthenga iimpahla neenkonzo eIndiya,
Ukuzimasa iintlanganiso zeshishini,
ukuseta amashishini okanye amashishini,
Ukuhambisa intetho phantsi kwesikim se-Global Initiative ye-Networkic Networks (GIAN),
ukuthatha inxaxheba kurhwebo kunye neefestile zeshishini kunye nemibukiso, kwaye
ukuza kwilizwe njengengcali okanye ingcali yeprojekthi yorhwebo.
I-e-Visa yeShishini ivumela undwendwe ukuba luhlale kweli lizwe kangangeentsuku ezili-180 ngexesha kodwa lusemthethweni unyaka omnye kwaye yiVisa yokuNgena okuNinzi. Abahambi bamashishini ukuya eIndiya banokuqhubeka nokuhamba ngezikhokelo ze Iimfuneko zeVisa kwiShishini laseIndiya ngemiyalelo eyongezelelweyo.
4. IVisa yoNyango lwaseIndiya (eVisa India)
Ishishini laseIndiya i-Visa luhlobo lokugunyaziswa ngombane okuvumela abafaki zicelo ukuba batyelele i-India ukuba injongo yotyelelo lwabo ifumana unyango kwisibhedlele saseIndiya. Lixesha elifutshane leVisa elisebenza kuphela kwiintsuku ezingama-60 kwaye liVisa yokungena kathathu. Iindidi ezininzi zonyango zinokwenziwa phantsi kolu hlobo lwe I-Visa yaseIndiya.
5. I-Visa ye-Medical Attendant ye-India (eVisa India)
I-e-Visa yeNdiya yaseIndiya luhlobo lwesigunyaziso se-elektroniki esivumela abafakizicelo ukuba batyelele e-India ukuba injongo yokutyelelwa kwabo kuhamba kunye nomnye umfaki-sicelo injongo yokutyelela kwakhe ukufumana unyango kunyango kwisibhedlele saseIndiya. Le yiVisa yethuba elifutshane elisebenzayo kangangeentsuku ezingama-60 kwaye yiVisa yokuNgena kabini.
Zimbini kuphela ii-e-Visa zoNyango zoNyango ezinokukhuselwa ngokuchaseneyo ne-e-Visa enye yoNyango.
6. I-Visa yeNkomfa yaseIndiya (eVisa India)
Ishishini laseIndiya i-Visa luhlobo lwesigunyaziso se-elektroniki esivumela abafaki-zicelo ukuba batyelele i-India ukuba injongo yotyelelo lwabo kukuya kwinkomfa, isemina, okanye indibano yocweyo ebilungiselelwe naliphi na isebe okanye amasebe kaRhulumente wase-India, okanye oRhulumente boRhulumente okanye uMbutho woLawulo loMdibaniso waseIndiya, okanye nayiphi na imibutho okanye iiPSUs eziqhotyoshelwe kwezi. Le Visa isebenza iinyanga ezi-3 kwaye iyiVisa yokuNgena ngaMnye. Rhoqo kungelilo, i-Visa yoShishino lwaseIndiya inokufakwa kubantu abatyelele iNkomfa eya eIndiya, bafake isicelo kwi-Intanethi Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya kwaye ukhethe ukhetho kwiShishini phantsi kohlobo lweVisa.
7. Izikhokelo zabafaki-zicelo ze-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (eVisa India)
Xa ufaka isicelo se-e-Visa yaseIndiya, umenzi-sicelo kufuneka azazi ezi zinto zilandelayo:
Kuyenzeka ukuba ufake isicelo se-e-Visa yaseIndiya kuphela kathathu ngonyaka.
Ngenxa yokuba umenzi-sicelo efanelekile i-Visa, kuya kufuneka enze isicelo kuyo okungenani Iintsuku ezingama-4-7 ngaphambi kokungena kwabo eIndiya.
I-Visa yaseIndiya ayinakuba njalo Uguqulwe okanye wandiswa.
I-Visa yaseIndiya ayinakukuvumela ukuba ufikelele kwiiNdawo eziKhuselweyo, eziThintelweyo, okanye eziziNdawo zokuThintela ukuBiwa.
IVisa yaseIndiya kufuneka yenziwe isicelo somenzi-sicelo ngamnye. Abantwana abanakubandakanywa kwisicelo somzali wabo. Umenzi-sicelo ngamnye kufuneka abe nepasipoti yabo eya kuthi idityaniswe ne-Visa yabo. Oku kunokuba yipasipoti esemgangathweni kuphela, hayi idiploma okanye isemthethweni okanye naluphi uxwebhu lokuhamba. Le ncwadana yokundwendwela kufuneka ihlale isebenza kangangeenyanga ezintandathu ukusukela kumhla wokufakwa komenzi-sicelo eIndiya. Kuya kufuneka okungenani ibe namaphepha ama-6 angenanto ukuze athathwe isitampu liGosa eliMiselweyo.
Undwendwe kufuneka lubenembuyekezo okanye itikiti lokuya ngaphandle eIndiya kwaye kufuneka libe nemali eyaneleyo yokuhlala eIndiya.
Undwendweli kuya kufuneka luphathe i-e-Visa yabo ngamaxesha onke ngexesha lokuhlala kwabo eIndiya.
8. Amazwe anabemi abakufanelekelayo ukufaka isicelo kwi-e-Visa yaseIndiya
Ukuba ngummi weliphi na kula mazwe alandelayo kuyakwenza ukuba umenzi wesicelo afaneleke i-Visa yaseIndiya. Abafakizicelo abangabemi belizwe elingakhankanywanga apha baya kudinga ukufaka isicelo sephepha le-Visa kwisalelwano kwiNdawo yaseIndiya.
wena Kufuneka uhlale ujongile Indian Visa Ukufaneleka naluphi na uhlaziyo okanye naliphi na inyathelo lesizwe lakho lokundwendwela eIndiya kubakhenkethi, kwishishini, kwezonyango okanye kwinkomfa.
IRiphabliki yeCameron Union
Ri phablikhi yaseMakedoni
UChristopher oNgcwele kunye noNevis
ISaint Vincent kunye neGrenadines
Isiqithi seTurks kunye neCaicos
9. Amaxwebhu afunekayo kwi-e-Visa yaseIndiya
Nokuba uluhlobo luni lwe-e-Visa yaseIndiya efakelwa isicelo, wonke umfaki-sicelo kufuneka abe namaxwebhu alandelayo:
Ikopi ye-elektroniki okanye ekhutshiweyo kwiphepha lokuqala (lobomi bomntu) lepaspoti yomenzi-sicelo. URhulumente wase-India upapashe isikhokelo ngeenkcukacha kwinto ethathwa njenge yamkelekile Ikopi yokundwendwela yokundwendwela yaseVisa yaseIndiya.
Ikopi yomfanekiso wesicelo somntu wepaspoti wakutshanje (wobuso kuphela, kwaye ungathathwa ngefowuni), idilesi ye-imeyile esebenzayo, kunye nekhadi ledebhithi okanye ikhadi lokuthenga ngetyala lokuhlawula iifizi zesicelo. Jonga I-Indian Visa yeemfuno zeFoto ngemiyalelo eneenkcukacha ngobungakanani obamkelekileyo, umgangatho, ubungakanani, isithunzi kunye nezinye iimpawu zomfanekiso oza kwenza ukuba ube nakho Isicelo seVisa saseIndiya ukuba wamkelwe nguRhulumente wase-India.
Ukubuya okanye itikiti lokuya ngaphandle elizweni.
Umfaki-sicelo uya kubuzwa imibuzo embalwa yokuqonda ukuba bayayifanelekela na i-Visa enje ngemeko yengqesho yabo yangoku kunye nokukwazi ukuxhasa imali yokuhlala e-India.
Ezi nkcukacha zilandelayo ziya kuzaliswa kwifomu yesicelo se-e-Visa yaseIndiya kufuneka zihambelane ngqo nolwazi oluboniswe kwipasipoti yomenzi-sicelo:
Umhla kunye nendawo awazalelwa kuyo
Umenzi-sicelo uya kufuna kwakhona amaxwebhu athile akhethekileyo kuhlobo lwe-e-Visa yaseIndiya ayenzela isicelo.
Iinkcukacha zombutho wase-Indiya / urhwebo olululo / umboniso apho umenzi-sicelo wayeya kuba neshishini, kubandakanya negama nedilesi yesalathiso saseIndiya esinxulumene nayo.
Ileta yesimemo evela kwinkampani yaseIndiya.
Ikhadi lomenzi-sicelo / utyikityo lwe-imeyile kunye nedilesi yewebhusayithi.
Ukuba umenzi-sicelo uza e-India eze kuhambisa intetho phantsi kwe-Global Initiative for Networks Networks (i-GIAN) baya kudinga ukubonelela ngesimemo esivela kwiziko eliza kubamba i-thm njenge-faculty yokundwendwela kwilizwe langaphandle ekhutshwe ngu-GIAN ekhutshwe ngu-GIAN iZiko loNxibelelaniso lweLizwe viz. IIT Kharagpur, kunye nekopi yee-enopsops zezi zifundo baya kuzithatha njengeziko kwiziko lokubamba.
Ikopi yeleta evela kwiSibhedlele saseIndiya (ebhalwe kwiphepha elisemthethweni lesibhedlele) ukuba umenzi-sicelo uza kufuna unyango.
Umenzi-sicelo uya kucelwa ukuba aphendule nayiphi na imibuzo malunga nesibhedlele saseIndiya ababeza kumtyelela.
Umntu oze e-Visa kwi-Medical Attendant:
Igama lesigulana oza kuhamba nalo umenzi-sicelo kwaye ngubani ekufuneka ebambe i-Visa yoNyango.
Inombolo yeVisa okanye i-ID yesicelo somgcini we-Visa yezonyango.
Iinkcukacha ezinjengeNombolo yepasipoti yoMnikazi weVisa yeZonyango, umhla wokuzalwa komnikazi we-Visa yoNyango, kunye nobume bomnini woNyango lwe-Visa.
Ukucaciswa kwezopolitiko kubaphathiswa bezangaphandle, kwi-Ofisi yezeMicimbi yezeKhaya (i-MEA), Urhulumente wase-India, kwaye nokuba kukhethwa, kucacile kwiminyhadala evela kuMphathiswa wezaseKhaya (MHA), Urhulumente wase India.
10. Iimfuneko zokuhamba kubemi abavela kumazwe afihlileyo achaphazeleke
Umenzi-sicelo kuya kufuneka abonise iKhadi lokuThintela ukuba i-Yellow Fever ukuba ngaba bangabemi okanye batyelele ilizwe elinachaphazeleka yi-Yellow Fever. Oku kusebenza kula mazwe alandelayo:
IDemocratic Republic of Congo
Amazwe kuMzantsi Melika:
ITrinidad (iTrinidad kuphela)
11. IiZibuko eliGunyazisiweyo lokungena
Ngelixa usiya eIndiya kwi-e-Visa yaseIndiya, undwendwe lunokungena kweli lizwe kuphela ngokujonga izithuba ezilandelayo zokujonga ukuba ngubani.
Uluhlu lwezikhululo zeenqwelomoya ezingama-28 ezigunyazisiweyo kunye nezibuko ezi-5 eIndiya:
Ngelixa amazibuko angentla ayindawo kwi snapshot yexesha kufuneka ujonge kulo naluphi na uhlaziyo kwezi zibuko zingezantsi kweli candelo eligcinwe kude kube ngoku: I-Visa yeNdawo yokuGunyazisa yeNdawo yokuGqibela, ukuphuma eIndiya kuyafumaneka kwiindawo zokujonga ezinkulu kakhulu: Amachweba oGunyaziso lweVisa yaseNdiya.
12. Ukufaka isicelo se-e-Visa yaseIndiya
Urhulumente waseIndiya wenze lula inkqubo yokwenza isicelo se-visa ye-elektroniki. Le nkqubo icacisiwe kwaye ichazwe ngokweenkcukacha kwi Inkqubo ye-Visa yaseIndiya. Bonke abahambi bamazwe aphesheya abafanelekileyo kuyo banakho Faka isicelo se-Indian e-Visa ekwi-Intanethi apha. Emva kokwenza njalo, umfaki sicelo uza kufumana uhlaziyo malunga nenqanaba lesicelo nge-imeyile kwaye ukuba kuyamkelwa baya kuthunyelwa iVisa yabo ye-elektroniki nge-imeyile. Akufuneki kubekho bunzima kule nkqubo kodwa ukuba ufuna ingcaciso kufuneka IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya inkxaso nenkokhelo. Izizwe ezininzi zinokulufumana olu ncedo lokufaka isicelo ekhaya seVisa yaseIndiya kubandakanya Abemi baseMelika, Abemi baseBritane, Abemi baseFrance Ngaphandle kwamanye amazwe angama-180 afanelekileyo kwi-Indian Visa Online, jonga India Visa Ukufaneleka.